Hygiene Data: Ntuziaka Ndenye Iji Jikọọ data mkpochapụ | Martech Zone
Njikọ dị ọnụ bụ ọrụ dị mkpa maka azụmaahịa azụmaahịa dịka ịre ahịa ozi na ozugbo inweta otu eziokwu. Agbanyeghị, ọtụtụ ụlọ ọrụ kwenyere na usoro mkpocha ahụ bụ naanị usoro na ọrụ Excel na-eme obere ihe iji dozie mkpa dị mgbagwoju anya nke ogo data.
Ntuziaka a ga - enyere ndị azụmaahịa na ndị ọrụ IT aka ịghọta usoro mkpocha, ma nwee ike mee ka ha ghọta ihe kpatara na ndị otu ha agaghịzi enwe ike ijikọ ma kpochaa site na Excel.
Kedu ihe bụ usoro mmezi ma ọ bụ ọrụ?
Jikọrọ ọnụ bụ usoro nke na-eweta ọtụtụ isi mmalite nke data n'otu ebe ma n'otu oge ahụ wepụ ihe ndekọ ọjọọ na oyiri site na isi mmalite.
Enwere ike ịkọwa ya na ihe atụ na-esonụ:
Rịba ama na onyinyo ahụ dị n'elu nwere ihe ndekọ atọ yiri nke ahụ na ọtụtụ okwu metụtara ogo data. Mgbe ị na-etinye ọrụ mkpokọta ọrụ na ndekọ a, ọ ga-agbanwe dị ka ihe dị ọcha na nke dị iche iche dịka ọmụmaatụ dị n'okpuru:
N'elu ijikọ na ihichapu oyiri sitere n'ọtụtụ data sitere na data, nsonaazụ a na-egosi nsụgharị agbakọtara nke ndekọ mbụ. E tinyela kọlụm ọzọ [Industrylọ Ọrụ] n’ime ihe ndekọ ahụ, sitere na nsụgharị ọzọ nke ndekọ ahụ.
Mmepụta nke usoro mkpochapu na-emepụta ihe ndekọ nwere ozi pụrụ iche nke na-eje ozi maka ebumnuche azụmahịa nke data. N'ihe atụ dị n'elu, n'elu kachasị, data ahụ ga-abụ ihe ndekọ a pụrụ ịdabere na ya maka ndị na-ere ahịa na mkpọsa ozi.
Omume kachasị mma maka njikọta na iwepu data
N'agbanyeghị ụlọ ọrụ, azụmaahịa, ma ọ bụ nha ụlọ ọrụ, jikota usoro mkpocha dị ka ihe ndabere maka ebumnuche ịgba data. Ọ bụ ezie na mmega ahụ na-ejedebe na nchikota na mkpochapu, taa ijikọ na ihichapụ aghọwo usoro dị mkpa nke na-enyere ndị ọrụ aka nyochaa data ha n'ụzọ zuru ezu.
N'agbanyeghị na usoro a na-arụ ọrụ na-akpaghị aka ugbu a site na oke jikota sọftụwia ngwanrọ na ngwaọrụ, ndị ọrụ ka kwesịrị ịnọgide na-enwe ndị kasị mma omume maka data jikọrọ ọnụ. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ m na-akwado gị ka ị soro:
Nọgide Na-elekwasị Anya na Ọdịmma data: Tupu ị rụọ ọrụ mkpokọta ọrụ, ọ dị mkpa iji hichaa ma dezie data, n'ihi na nke a na-eme ka o doo anya na usoro nkwụsịtụ dị mfe. Ọ bụrụ n ’ịkwụpụ n’ewepụtaghị data ahụ, nsonaazụ ya ga-emechu gị ihu.
Rapara na Atụmatụ Dị Adị: Nke a bụrụ na usoro ịmekọrịta data dị mfe abụghị ihe kachasị mkpa maka gị. A na-atụ aro ka ịmepụta atụmatụ nke ga - enyere aka nyochaa ụdị ndekọ ị na - achọ ijikọ ma kpochapụ.
Na-achọpụta ụdị data gị: N'ozuzu, mgbe usoro mkpocha mbụ, ụlọ ọrụ na-azụlite nghọta ka mma banyere ụdị data ha. Ozugbo nghọta nke mbido banyere ụdị gị mepụtara, ị nwere ike ịme KPI ma belata oge ị na-etinye na usoro zuru oke.
Manọgide Na-edekọ Ihe Ndekọ: Ikpochapu ihe edeturu abughi ihe nhichapụ ihe edeputara. Ihe data ọ bụla jikọrọ sọftụwia ga - enyere gị aka ịchekwaa ihe ndekọ ahụ ma jigide nchekwa data nke mgbanwe ọ bụla emere na ndepụta ahụ.
Idebe Otu Isi Iyi nke Eziokwu: Mgbe e nwetara data onye ọrụ na ọtụtụ ihe ndekọ, a na-enwe nghọtahie n'ihi ozi dịgasị iche. N'okwu a, ijikọ na ihicha na-enyere aka ịmepụta otu isi iyi nke eziokwu. Nke a gụnyere ozi niile dị mkpa gbasara ndị ahịa.
Uru nke Nlekọta Onwe Gị jikọtara Software
Ihe ngwọta dị irè iji mepụta otu isi iyi nke eziokwu ma jide n'aka na ị gbasoro usoro kachasị mma, na-enweta ngwanrọ ngwanrọ. Ngwaọrụ dị otú a ga-edegharị ihe ndekọ ochie site na iji ozi ọhụrụ site na usoro nlanarị data.
Ọzọkwa, ijikọ ọrụ mkpofu onwe ha nwere ike ime ka ndị ọrụ azụmaahịa jikọta ha nke ọma ma kpochapụ ihe ndekọ data ha n'emeghị ka ọ dị ha mkpa inwe ihe ọmụma ma ọ bụ ahụmịhe mmemme.
Ezigbo ngwakọta ngwugwu nwere ike inyere ndị ọrụ azụmaahịa aka:
Na-akwadebe data site na nyocha nke njehie na nkwekọrịta ozi
Nhicha na ịhazi data dịka iwu azụmaahịa akọwapụtara
Abịa na otutu anatara site na a Nchikota guzobere algọridim
Wepụ oyiri na oke ziri ezi
Mepụta ndekọ ọla edo na inweta otu isi iyi nke eziokwu
& ọtụtụ ndị ọzọ
Ọ baghị uru ikwu, n'ọgbọ ebe akpaaka adịla mkpa maka ọganiihu azụmaahịa, ụlọ ọrụ agaghị enwe ike igbu oge na-ebuli data azụmaahịa ha. Ya mere, ihe omuma ihe omuma / nhicha ugbua abụrụla ihe ngbanwe nke nsogbu nke nsogbu ochie nke metụtara usoro ihe mgbagwoju anya maka ijikọ na ihicha data.
Otu data ụlọ ọrụ bụ otu n'ime akụ ha bara uru nke ukwuu - yana dịka akụ ọ bụla ọzọ, data chọrọ nurturing. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ aghọwo laser lekwasịrị anya inweta ọtụtụ ozi na iwulite nchịkọta data ha, data enwetara na-akwụsị ụra ma were CRM dị oke ọnụ ma ọ bụ ohere nchekwa ogologo oge. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ọ dị mkpa ka ehichapụ data ahụ tupu etinye ya n'ọrụ azụmahịa.
Agbanyeghị, usoro mgbagwoju anya nke ijikọ / nhichapụ nwere ike ịme ka ọ dị mfe site na njedebe ngwanrọ ngwanrọ na-enyere gị aka ijikọ isi mmalite data ma mepụta ndekọ ndị bara uru n'ezie.
Data Ladder bụ ụlọ ọrụ ngwanrọ data dị mma nke enyere aka na-enyere ndị ọrụ azụmahịa aka ịbawanye uru na data ha site na njikọ data, njirimara, ntinye akwụkwọ, na ngwongwo. Ma ọ dabara na nde ndekọ site na algorithms anyị jikọtara ọnụ, ma ọ bụ na-agbanwe data ngwaahịa dị mgbagwoju anya site na teknụzụ nke asụsụ, usoro data data data na-enye ọkwa dị elu nke ọrụ na-enweghị atụ na ụlọ ọrụ ahụ.
Budata Ule n’efu
Tags: adreesị ọchaadreesị geocodingnyocha adreesịdata crmdatanhazi ọkwa dataọrụ nhicha datainyekwu datanhicha datadata ububeegwuregwu egwuregwudata profaịlụogo datanjikwa njikwa datadatamatchụlọ ọrụ datamatchitinyedata ulo orualgorithms dabarajikota kpochapụngwaahịa egwuregwundekọ jikotadata echechirinhazi ọkwa data ezighi eziemeghi ka data dị ọcha